कोरोना भाइरस मानिसका लागि म´हामारी भएपनि पृथ्वीलाई फाइदा ! – Butwal Sandesh
कोरोना भाइरस मानिसका लागि म´हामारी भएपनि पृथ्वीलाई फाइदा !
एजेन्सी । कोरोना सं क्रमण सुरु भएपछि चीनको हुबेइ प्रान्तमा सबै किसिमका व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द भए भने सर्वसाधारणलाई पनि भाइरस फैलन नदिन घरैमा बसिरहन भनिएको थियो । तर यसबीच हुबेइका सबै नागरिकले एउटा अप्रत्यासित लाभ प्राप्त गरेका हुन् – प्रदुषणरहित खुला नीलो आकाश ।
यसरी हुबेइमा फेब्रुअरी महिनामा मात्र गुणस्तरीय हावायुक्त दिनहरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको चीनको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । र यस्तो हुने हुबेइ एक मात्र प्रान्त होइन । नासा र युरोपेली स्पेस एजेन्सीले सार्वजनिक गरेका स्याटलाइट तस्बिरहरुमा, जनवरी र फेब्रुअरीमा चीनका सबै मुख्य सहरहरुमा नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन ठूलो स्तरमा घटेको पाइएको हो । सो ग्यास सवारी साधन, पावर प्लान्ट र उद्योगहरुबाट निस्किने गर्दथ्यो । यस्तोमा अरुबेला सधैँ आकाशका स्पष्ट रुपमा देखिने विषाक्त ग्यासको बादल ती दुई महिनामा पूर्णरुपमा हराएका हुन् ।
हावाको गुणस्तरबारे रिसर्च गर्ने नासाका फेइ लिउले भनेका छन्, “यति ठूलो स्तरमा र यति धेरै भूभागमा निश्चित समयका लागि कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण भएको मैले पहिलोपटक देखेको हुँ । तरपनि मलाई त्यति आश्चर्य भने लागेन किनकी देशव्यापी रुपमा भाइरस नियन्त्रणका लागि सहरहरु बन्द गरिएको थियो । ” फेब्रुअरी ३ देखि मार्च १ का बीच चीनमा कार्बन उत्सर्जन २५ प्रतिशत कम थियो जबकि चीनलाई विश्वकै ठूलो प्रदुषक मानिन्छ ।
चीन एक्लैलाइ विश्वव्यापी ३० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार मानिन्छ । यस्तोमा यो नयाँ गिरावट अत्यधिक छोटो समयका लागि तर एकदमै ठूलो उपलब्धी भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
इन्धन र स्टिल उत्पादनमा कमी र घरेलु उडान पनि ७० प्रतिशतले कटौति भएको हुँदा यसले प्रदुषण न्युनिकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको हो ।
२०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिङले देशलाई प्रदुषणमुक्त बनाएरै छाड्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए जसको अर्को वर्ष नै वातावरण तथा पर्यावरण मन्त्रालय निर्माण गरिएको हो ।
त्यसपछि ल्याइएका वातावरण सम्बन्धी नयाँ नीति नियमहरुको चीनमा उल्लेखनीय प्रभाव पनि परेको थियो । २०१७ देखि १८ सम्ममा चीनको प्रदुषण स्तर १० प्रतिशतले घटेको ग्रिनपिसको रिपोर्टले देखाएको छ ।
यस्तोमा वातावरण संरक्षण कार्यकर्ताहरुले चीनका लागि यो संकटको क्षण वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी दिइएका वचन पूरा गर्ने राम्रो अवसर भएको बताइरहेका छन् ।
ग्रिनपीसका लागि पूर्वी एसियाका वातावरण नीति सल्लाहकार लि शुओले भनेका छन्, “हामी चीनसमक्ष आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थाबाट कायापलट गरि वातावरणमैत्री बनाउन यो मौकाको सक्दो उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहनेछौँ ।”
तर अर्कोतर्फ चीन भाइरस प्रकोपबाट बाहिर निस्किएपछि केबल अर्थतन्त्र स्थिर गर्नमा मात्र केन्द्रित रहनेमा भने आफूहरु बढी चिन्तित रहेको लिले बताए ।
अमेरिकासँगको व्यापारिक युद्धले पहिले नै चीनको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको थियो । यस्तोमा अर्थतन्त्र पुनःनिर्माणको नयाँ योजनावापद् वातावरणले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
यता छिमेकमा, हङकङको प्रदुषण स्तर पनि कम भएको छ भने हावाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार देखिएको हो ।
जनवरीदेखि फेब्रुअरीका बीच त्यहाँ प्रमुख प्रदुषकहरुमा झन्डै एक तिहाइले गिरावट आएको हङकङ युनिभर्सिटीको डाटाले देखाएको छ । शहरका सबैभन्दा व्यस्त क्षेत्रहरुमा कण प्रदुषण, पीएम २.५ मा ३२ प्रतिशत गिरावट आएको हो ।
हङकङमा विशेषगरी सवारी साधन र पावर प्लान्टकै कारण प्रदुषण हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै इटलीमा पनि वायु प्रदुषण कम भएको स्याटलाइट डाटाले देखाएको हो । यसरी युरोप, अमेरिका लगायत विश्वभरका विभिन्न शहरहरु लकडाउनमा रहँदै गर्दा यसले केही समयका लागि भएपनि पृथ्वीलाई धुँवाधुलो रहित बनाइरहेको छ । सीएनएन